Yintoni ebalulekileyo yeNani kuYuda?
Usenokuba weva nge- gematria , inkqubo apho yonke incwadi yesiHeberu inenani elithile lamanani kunye nokulingana kwamanani ezinobumba, amagama, okanye amabinzana kubalwa ngokufanelekileyo. Kodwa, kwiimeko ezininzi, kukho iinkcazo ezilula kumanqaku ebuYuda, kuquka amanani 4, 7, 18, no-40.
UbuYuda kunye neNombolo 7
Inombolo yesisixhenxe iyabonakala ngokuphawulekayo kulo lonke iTorah, ukususela ekudalweni kwehlabathi kwiintsuku ezisixhenxe ukuya kwiholidi likaShavuot eligubhayo kwiSprings, okoqobo lithetha "iiveki." Ezi sixhenxe ziba ngumntu obalulekileyo kwisiYuda, efanekisela ukupheliswa.
Kukho amakhulu eminye inxibelelwano kwinani le sixhenxe, kodwa nakhu ezinye zezona zinto zinamandla kwaye zivelele:
Ivesi lokuqala leTorah linamazwi asixhenxe.
I-Shabbat iwa ngomhla we-7 weveki kunye neSabbat nganye kukho abantu abasixhenxe ababizelwe kwiTorah yokufunda iTorah (ebizwa ngokuba yi- aliyot ).
Kukho imithetho eyisixhenxe, ebizwa ngokuba yiMithetho yeNoahide, esebenza kubo bonke abantu.
IPasika kunye neSukko zigujwa iintsuku ezisixhenxe kwaSirayeli (Levitikus 23: 6, 34).
Xa isihlobo esisondeleyo sifa, amaYuda ahlala e- shiva (oku kuthetha ezisixhenxe) iintsuku ezisixhenxe.
UMoses wazalwa waza wafa ngomhla wesi-7 wenyanga yesiHebhere yase-Adar.
Isibetho ngasinye eYiputa sasihlala iintsuku ezisixhenxe.
Iindoda eziseTempile zazingamasebe asixhenxe.
Kukho iholide eziyisixhenxe ezikulo nyaka wamaYuda: Rosh HaShanah, Yom Kippur, Sukkot, Chanukah, Purim , Pasika, naseShavuot.
Emtshatweni wamaYuda , umtshakazi ujikeleza umyeni ngokuphindaphindiweyo kwezihlandlo ezisixhenxe phantsi komtshato womtshato ( chupah ) kwaye kukho iintsikelelo ezisixhenxe kunye neentsuku ezisixhenxe zokubhiyozela ( sheva brachot ).
U-Israyeli ugubha ngeentlobo ezisixhenxe ezikhethekileyo ezivelisa: ukolweni, ibhali, iidiliya, igromegranate, amakhiwane, iminqumo, kunye nemini (Duteronomi 8: 8).
Kukho abaprofeti abasixhenxe ababizwa ngokuba yiTalmud: uSara, uMiriyam, uDebhora, uHana, uAbhigali, uChuldah noEstere.
UbuYuda kunye neNombolo 18
Enye yezona zininzi ziyaziwa ngobuYuda. NgamaYuda, iileta zesiHebhere zonke zihamba nazo zixabise inani, kwaye i-10 ne-8 zidibanisa ukupela igama elithi chai , elithetha "ubomi." Ngenxa yoko, uya kubakho ukubona amaYuda enika imali ngokunyuka kwe-18 ngenxa yokuba kuthathwa njengesilumkiso esihle.
Umthandazo waseMidah uyaziwa nangokuthi uShemonei Esrei , okanye i-18, nangona iinguqulelo zanamhlanje zomthandazo unemithandazo engu-19 (eyona nto yayineminyaka eyi-18).
UbuYuda kunye no-Numeri 4 no-40
I-Torah neTalmud inikeza imizekelo eyahlukeneyo ebaluleke kakhulu kwinani le-4, kwaye, emva koko, 40.
Inombolo yesine ibonakala kwiindawo ezininzi:
abafazi abane bakaYakobi
ezine iintlobo zoonyana kwiPasika yePasika
Njengo-40 ininzi yezine, iqala ukujongwa ngeentsingiselo ezibalulekileyo ngakumbi.
Ngokomzekelo we-Talmud, i- mikvah (i-bathrooms) kufuneka ibe nama-40 a "amanzi aphilayo," kunye nama- seah ayindlela yokudala yamandulo. Ngokungqinelanayo, le mfuneko "yamanzi aphilayo" idibanisa neentsuku ezingama-40 zomkhukula ngexesha leeNowa. Kanye njengoko ihlabathi lalicingwa lihlambulukile emva kweentsuku ezingama-40 zokuthulula imvula, ke, ke, umntu ocingwa njengento ecocekileyo emva kokuphuma emanzini aseMikvah .
Ngengqiqo enxulumene nenombolo 40, inkulungwane yeshumi elinesi-16 ye-Talmudic isazi sePrague, iMaharal (uRabi Yehudah Loew ben Bezalel), inombolo 40 inamandla okuphucula imeko yokomoya. Umzekelo wale minyaka yiminyaka engama-40 amaSirayeli ayekhokelwa entlango elandelwa iintsuku ezingama-40 uMoses achitha eNtabeni yeSinayi, ixesha apho amaSirayeli ayefika entabeni njengesizwe sakwa-Egypt kodwa emva kwezi ntsuku ezingama-40 wavuswa njengohlanga lukaThixo.
Le yilapho i- Mishna yeklasi e-Pirkei Avot 5:26, eyaziwayo njenge-Ethics of Fathers, ifumana ukuba "indoda engama-40 iyafumana ukuqonda."
Kwesinye isihloko, i-Talmud ithi kuthatha iintsuku ezingama-40 ukuba i-embryo ibekwe kwisibeleko sikamama.
Abafazi beTorah babengabambiseneli bakwaSirayeli
Yenza i-Besom Yakho
Indlela Yokufumana Isikhokelo Sakho Somoya
Indlela Yokugwema Iingcingo ze-Ready Psychic Reader
Indlela Igumbi-Ukufudumala Kwamaqondo Okutshintsha Ngayo Ihlabathi
Izinyathelo ezili-10 zokubhala Imbali Yentsapho Yakho
Iingxaki eziPhambili zeMfazwe yombango
5 Iintlobo zeMidesi yaseMntla yaseMelika
Ukuxhatshazwa kunye nokuxabana kwiPeninsula yaseKorea
Isingeniso sokuPhuma kweZandla
I-Major Arcana yeTarot
Iinqununu eziPhambili zeeNqununu
10 Iikhukhi eziphambili zeeKota eziphantsi kweeR10 000
I-Perl String uc () Umsebenzi - I-Quick Tutorial
Yiyiphi i-Managerial Entrenchment?